पर्स पछाडी राख्ने गर्नु हुन्छ भने यी चार रोगको खतरा,पढनुहोस » खबरहरुको एउटै केन्द्र
पर्स पछाडी राख्ने गर्नु हुन्छ भने यी चार रोगको खतरा,पढनुहोस
सोमबार, बैशाख १७, २०७५ १३:३३ मा प्रकाशित !
एजेन्सी-पर्सलाई धेरैजसो मानिसले आफ्नो पछाडिको खल्तीमा राख्ने गर्दछन् । यदि तपाईं पनि यस्तै गर्नुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो यो बानी तुरुन्तै हटाउनु पर्नेछ नभए विभिन्न रोगको शिकार हुनुपर्छ । पर्समा हामी पैसाको साटो विभिन्न कार्ड, सिक्का, आइडीलगायतका वस्तु राख्छौं जसले पर्स निकै मोटो बनाउँछ । यस्तोमा यदि तपाईंले पछाडिको खल्तीमा यस्ता मोटो पर्स राख्नुहुन्छ भने यसले तपाईंको शरिरको तल्लो भागको ब्यालेन्स बिगार्ने गर्दछ । त्यसकारण पछाडिको खल्तीमा पर्स राख्दा तपाईंले विभिन्न स्वास्थ्य समस्या झेल्नुपर्छ ।
PREVIOUS POST Previous post: यस्तो छ आज बिदेशी मुन्द्राको विनियम दर
NEXT POST Next post: पाठेघरको निःशुल्क शल्यक्रिया शिविरले डोल्पाली महिलामा ल्यायो खुशी
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, बैशाख १७, २०७५ १३:३३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, बैशाख १७, २०७५ १३:३३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, बैशाख १७, २०७५ १३:३३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, बैशाख १७, २०७५ १३:३३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, बैशाख १७, २०७५ १३:३३